"Chikosoro Kakawanda kurwara. zvokuita?"Mhinduro,!
imi muri pano: musha Tips "Chikosoro Kakawanda kurwara. zvokuita?"Mhinduro,!
Kubva pauduku isu tose zvakakwana zvisingafadzi zviratidzo inotonhora: prostration, tembiricha, chando, chikosoro, mapfupa achirwadza uye nezvimwe zvakadaro "nemazango". Vakuru kazhinji kurwara zvishoma kazhinji, kupfuura vana, asi haugoni, kuti zviri nyore kuti kudzivirira pamusoro zvakajairika mavhairasi inotonhora uye zvirwere.
Nhasi tichataura pamusoro, sei kudzivisa mangwanani kudzoka chirwere mushure kwasvika chete achiporesa. Matambudziko - kupfuura chisingafadzi chikamu vanhuwo chando, nekuti vanogona kumutsa munhu achiipa echirwere zvirwere, uye kutungamirira kukudziri- idzva pathological ari viscera. On kudzivirirwa uye mishonga chikosoro uye besa chiayte nyaya yedu yepaIndaneti – http://forcys.ru/article/chastye_prostudy_u_vzroslyh-74/.
saka, mukana yematambudziko uye chirwere dzokororo zvakakwirira, kana:
kana hosha vave kuderedzwa tembiricha - chiratidzo kuparara muviri dzokuzvidzivirira uye kutapata;
imi muri kurwara kwenguva yakareba 7-10 mazuva, uye kuvandudzika ndevenguva;
Chaioneka kupfupika kufema;
chikosoro hwapedyo uye anorambira.
Kana nzira iwe akashandisa mishonga havana vakaedzwa kukosha kwavo tsika,, unofanira kutanga kushanyira chiremba. pamwe, kana kune gadziriro va neudhadha kana kukodzera, munyika isiri kurapwa regimens, kana matambudziko yakadzama muviri wako.
chitsamba, mafungire kuti anewo guru chaizvo zvazvinoita kupora akurumidze. The zvakawanda tariro mweya yenyu yomukati, ari kusimba kwako zvirwere. Uyewo, muviri inoda zororo zvakakodzera, zvikasadaro uko Achatora simba kudzivirira zvirwere uye rinobudirira?
Matambudziko chikosoro kunogona otitis, sinusitis, bronchitis, chibayo, uye mabatiro chezvinhu izvi ezvinhu kungada zvakawanda simba, pane hanya pachavo utano hwavo kuitira kudzivirira kukura nematambudziko.
Kana mashoko okuti "chikosoro kakawanda kurwara, zvokuita - handizivi "pamusoro pako, matanho chakakomba zvinofanira pakarepo kuti muhondo chikosoro. Izvi zvichabatsira itsva zvinodhaka Fortsis - lozenges pamwe inobudirira polyphenol dzakaoma.
Izvi zvinhu Makafukidzwa mavhairasi noutachiona, regai kuvabvumira mberi, kudzivirira mamwe kunoita chirwere. Ndokusaka kubudirira Fortsis, zvichienzaniswa vazhinji Pharmacy zvinodhaka, dzakakwirira zvikuru.
Fortsis rubatsiro WAIZOZVIDZIVIRIRA uye vadiwa nechando munguva mwaka uye kupa simba kune chikamu nehosha nokukurumidza, kana utachiona kwakatoitika. Fortsis - imwe mishonga ano kune avo, anoda kurarama pasina chikosoro!